Posted by Tranquillus | Jan 19, 2021 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Arrimo kala duwan ayaa u horseedi kara shirkadda in aysan sii bixin mushaharka shaqaalaheeda. Marka ugufiican, tani si fudud waa qalad kormeer ama xisaabeed. Laakiin xaalada ugu xun, bixin la'aantu waxay sabab u tahay ganacsigaaga oo haysta dhibaatooyin dhaqaale. Laakiin, xitaa shuruudahaan, loo-shaqeeyahaagu waa inuu bixiyaa kharashyadiisa, gaar ahaan mushaharka shaqaalahooda. Haddii ay dhacdo daahitaan ama bixinta mushaharka, shaqaaluhu, dabcan, waxay dalban karaan in mushaharkooda la bixiyo.
Qiyaastii bixinta mushaharka
Sida ay yiraahdaan, shaqada oo dhan waxay mudan tahay mushahar. Marka, iyada oo loo celinayo mid kasta oo ka mid ah guulaha uu ka gaadhay booskiisa, shaqaale kasta waa inuu helaa lacag u dhiganta shaqadiisa. Mushaharku wuxuu ku qeexan yahay qandaraaskiisa shaqo. Oo waa inay u hoggaansamaan qodobbada sharciga iyo qandaraaska ee shirkad kasta oo Faransiis ah ay ku xiran tahay.
Shirkad kastoo aad u shaqeysid, waxaa looga baahan yahay inay ku siiyaan mushaharka lagu heshiiyey ee ku qoran heshiiskaaga shaqada. Faransiiska gudaheeda, shaqaaluhu waxay helaan mushaharkooda bil kasta. Tani waa qodobka L3242-1 ee Xeerka Shaqaalaha taas oo cayimaysa halbeeggan. Kaliya shaqaalaha xilliyada, is-dhexgalka, shaqaalaha ku meelgaarka ah ama kuwa madaxbanaan ayaa hela lacagtooda labadii toddobaadba mar.
Bixin kasta oo bille ah waa inay u dhigantaa warqadda mushaarka oo sheegaysa muddada shaqada la qabtay inta lagu jiro bisha, iyo sidoo kale xaddiga mushaharka la bixiyay. Xaashidan mushaharku waxay bixisaa faahfaahinta lacagta la bixiyey, oo ay ku jiraan: gunnooyinka, mushaharka aasaasiga ah, soo celinta, hoos u bixinta, iwm.
READ Kelmadee edeb leh waa in ay raacdaa qaabdhismeedka "Pending..."?
Goorma ayaa mushaarka loo arkaa mid aan la bixin?
Sida sharciga faransiisku dhigayo, waa in mushaharkaaga laguu siiyaa bil kasta oo joogto ah. Lacag bixintaan billaha ah ayaa markii hore loogu talagalay inay ku shaqeyso iyada oo loo daneynayo shaqaalaha. Mushaharka waxaa loo arkaa mid aan la bixin markii aan lagu bixin bil gudaheed. Waa inaad ka xisaabisaa taariikhda lacag bixinta ee bishii hore. Haddii had iyo jeer, wareejinta bangiga mushaharka la sameeyo 2-da bisha, waxaa jira dib-u-dhac haddii aan lacagta la bixin illaa 10-ka.
Maxay yihiin dib u helidaada haddii ay dhacdo mushahar la'aan?
Maxkamaduhu waxay u tixgeliyaan mushahar la’aanta shaqaalaha dambi weyn. Xitaa haddii jebinta lagu caddeeyo sababo sharci ah. Sharcigu wuxuu cambaareynayaa ficilka ah in mushahar la siin waayo shaqaalihii horey loo qabtay.
Guud ahaan, maxkamadda shaqaaluhu waxay shirkadda uga baahan tahay inay bixiso lacagaha ay khuseyso. Ilaa iyo inta uu shaqaaluhu la kulmay cuqdad darteed dib udhacaas, shaqo-bixiyeha ayaa waajib ku ah inuu siiyo magdhow.
Haddii dhibaatadu sii socoto waqti ka dib oo xaddiga biilasha aan la bixin ay noqdaan kuwo muhiim ah, markaa waxaa jiri doona jebinta heshiiska shaqada. Qofka shaqaalaha ah waa la ceyrin doonaa sabab la'aan wuxuuna ka faa'iideysan doonaa magdhowyo kala duwan. Waa dambi ciqaab ah inaad bixin weydo mushaharka shaqaalaha. Haddii aad go'aansato inaad xareyso cabasho, waa inaad sameysaa inta lagu jiro 3-da sano ee ku xigta taariikhda mushaharkaaga aan lagu siin. Waa inaad tagtaa maxkamadda warshadaha. Waa nidaamkan lagu sharaxay qodobka L. 3245-1 ee Xeerka Shaqada.
READ Warqad qoraal ah oo ku saabsan codsi kordhinta mushaharka guuleysta
Laakiin ka hor intaadan taas gaarin, waa inaad marka hore isku daydaa habka ugu horreeya. Tusaale ahaan, adoo u qoraya maareeyaha waaxda maamusha warqadaha mushahar bixinta ee shirkaddaada. Halkan waxaa ah laba tusaale oo boostada ah si aad isugu daydo inaad xaaladda ku xalliso si nabad ah.
Tusaale 1: Sheegasho mushahar aan la bixin bishii hore
Gudaha [Magaalada], taariikhda
Ujeeddo: Sheegasho mushahar aan la bixin
Ka shaqeeya gudaha ururkaaga tan iyo (taariikhda shaqaalaynta), waxaad si joogto ah ii siisaa wadarta (qadarka mushaharka) sida mushahar bille ah. Aniga oo aaminay shaqadayda, nasiib daro nasiib xumo xun ayaa ihaysay markaan arkay in wareejinta mushaharkayga, oo badanaa dhaca (taariikhda caadiga ah) ee bisha, lama fulinin bisha (…………).
Waxay igu ridaysaa xaalad aan raaxo lahayn. Iminka aniga macquul iima aha inaan bixiyo kharashyadayda (kirada, kharashka carruurta, mag-bixinta amaahda, iwm.). Sidaas darteed waan ku faraxsanahay haddii aad saxdo qaladkan sida ugu dhakhsaha badan.
Inta aan jawaab deg deg ah kaa sugayo, fadlan aqbal salaanteyda ugu fiican.
Tusaale 2: Cabashada dhowr mushahar oo aan la soo uruurin
Ujeeddo: Sheegasho bixinta mushaharka bisha… LRAR
Waxaan jecelahay inaan halkan idinku xasuusiyo inaynu ku xidhnay heshiis shaqo oo ku taariikheysan (taariikhda shaqaalaynta), oo ah jagada (jagadaada). Tani waxay qeexaysaa mushahar bille ah (mushaharkaaga).
Nasiib darrose, laga bilaabo bisha (bisha ugu horreysa ee aadan mushaharkaaga helin) illaa bisha (bisha hadda jirta ama bisha ugu dambeysa ee aadan helin mushaarkaaga) waxaan haystaa lama siinin. Bixinta mushaharkeyga, oo caadiyan ahayd inay dhacdo (taariikhda loo qabtay) iyo (taariikhda) lama sameyn.
Xaaladdaani waxay igu keenaysaa waxyeelo dhab ah waxayna wax u dhimaysaa noloshayda gaarka ah. Waxaan idinka codsanayaa inaad sida ugu dhaqsaha badan u daweysa cilladaan culus. Waa masuuliyadaada inaad iga dhigto mushaharkayga inta u dhexeysa (……………) ilaa ().) Markaan helo warqadan.
Waxaan rabaa inaan kugu wargaliyo in jawaab deg deg ah aan kaaga imaan. Waxaa laygu qasbi doonaa inaan la wareego masuuliyiinta awooda si aan u helo xuquuqdayda.
Fadlan aqbal, Mudane, salaanteyda xushmadda leh.
Download "Tusaale-1-Sheegasho-mushahar-la'aan-bishii-hore.docx"	Tusaale-1-Sheegasho-mushahar-la'aan-bishii-hore.docx - Soo degsaday 4661 jeer - 15 KB
Download "Tusaale-2-Sheegasho-in-dhowr-mushahar ah-aan la-bixin.docx"	Tusaale-2-Sheegasho-dhowr-mushahar-aan la bixin.docx - Waa la soo dejiyey 4466 jeer - 16 KB
Template warqad si aad u dalbato bixinta mushaharkaaga oo aan la bixin Febraayo 13, 2022Tranquillus
horeTemplate Waraaq si aad u codsato inaad hesho warqadaada mushaarka
socdaKu dhawaaqida go'aan aan la jecleysan: maxaa la sameeyaa?